पीडितको उद्धारका लागि के गर्दैछ उपमहानगर ? « Tulsipur Khabar
पीडितको उद्धारका लागि के गर्दैछ उपमहानगर ?
तुलसीपुर,२८ साउन । शुक्रवार राती देखि आएको अविरल वर्षाका कारणले क्षति भएका तुलसीपुरका विभिन्न वडामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले राहतको काम अगाडि वढाएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले तुलसीपुर ६ मोतिपुरमा गरेको बाटो कटानलाई ह्युम पाइप राखेर अस्थायी वाटो निर्माण गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाले पहल गरिसकेको वताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार जोखिममा रहेको वडा नम्वर ५ र १३ का जोखिमपूर्ण ठाउँमा डोजर लगाएर पानीको निकास निकाल्ने र पीडितको तथ्यांक संकलन गर्ने काम उपमहानगरपालिकाले गरिरहेको छ । उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई उद्दार, राहत, पीडितको तथ्याङक संकलन र उचित वसोवासका लागि निर्देशन दिइसकीएको समेत उहाँले वताउनु भयो ।
शनिवार अवेरसम्ममा वडा नम्वर १३ का पीडितहरुलाई चामल,दाल,तेल,भाडा, चिउरा, विस्कुट लगायतका तत्काल आवश्यकको राहत सामग्री वितरण गरिने उपमहानगरका कार्यकारी अधिकृत टोपेन्द्र केसीले वताउनुभयो । उहाँले बाढीका कारण घर भत्केरी मृत्यु भएकी तुलसीपुर १३ फुलवारीकी भगवती विकको परिवारलाई तत्काल क्रियाखर्च स्वरुप १० हजार दिइने र अन्य राहतका लागि तत्काल पहल गरिने पनि केसीले वताउनु भयो ।
मौसम पुर्वानुमान केन्द्रले अझै २४ घन्टा सम्म वाढीको खतरा रहेको जनाएकाले सवैलाई सुरक्षित स्थानमा सतर्कता पुर्वक रहन पनि मेयर पाण्डेले वताउनु भएको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७४ साउन २८ गते शनिवार